Shina W Seeries dia miorina amin'ny fitaovana fanerena sy fitaovana mpamatsy | KAIQUAN
Ny andian-dahatsoratra mahery vaika miady amin'ny afo dia miorina amin'ny famolavolana GB27898.3-2011 nasionaly, izay nanintona tanteraka ny zava-bita farany sy ny fanandramana ny teknolojia famatsian-drano poavaly tato anatin'ny taona faramparany tamin'ny resaka teknolojia sy ny fifantina ny ampahany.
Ny andian-tsolika W mitifitra miady amin'ny afo dia miorina amin'ny alàlan'ny endrika famoronana GB27898.3-2011, dia nandrava tanteraka ny zava-bita farany sy ny traikefa amin'ny teknolojia famatsian-drano poavaly tato anatin'ny taona faramparany momba ny teknolojia sy ny fifantina ny ampahany, ary vaovao sy fitaovana famatsiana rano miady amin'ny afo.
- Niditra an-tsakany sy an-davany ny fampiharana sy ny fanandramana traikefa ny fitaovana famokarana herinaratra maharitra ao anatin'ny folo taona lasa. Ny pump pump pressure, ny tanky ary ny rafitra fanaraha-maso dia noforonina manokana ary novokarin'ny orinasa.
- Matetika dia mifanentana amin'ny tankina amin'ny tsindry amin'ny diaphragm, izay manana rafitra fanamboarana mora be izy io ary afaka manatsotra ny rafitra fanaraha-maso. Ny fivoriam-pitaovana fanaraha-mason'ny tsindry dia manamboatra fomba fanaingoana fanamaintana manokana ho an'ny fampiasana maharitra sy azo itokisana.
- Misy fitaovana elektrika iraisam-pirenena sy an-trano malaza manerantany mba hahazoana antoka ny fahatokisana ny vokatra.
- Io dia ampiasaina amin'ny fitazomana ny tsindry mavesatra avy amin'ny tranonkala ofisialy amin'ny fotoana mahazatra
- Ampiasaina izy io hifanandratana ny tsindry mavesatra amin'ny fitaovam-piadiana amin'ny afo mandritra ny fanombohan'ny fako anaty afo
- Ampiasaina hanara-maso ny fanombohana ny fantsom-pifandraisana lehibe
Previous: Paompy-afo maty
Manaraka: KQK tontonana fanaraha-maso elektrika
KQTL atolotra fanolorana ny vokatra